Al’ Sampanasa Fikarohana sy Fandalinampinoana (FFP) – FJKM
Alahady 23 Septambra 2018.
Hira Faneva 50 Taonan’ny FJKM
Fiantsoana sy fiderana an’ Andriamanitra
Fanambarana ny sitrapon’ Andriamanitra : Mika 6.8 / Sal 119.1,2
Famelankeloka : Eze 36.25-27 / Sal 32.1-2
Hira FF 15.2
Fanekempinoana lah 3
Raharahampiangonana sy Hafatra
Rakitra sy fanolorana ny Rakitra .Hira 275.1
Tenin’ Andriamanitra :
Hira 636 .1,2,3
Vavaka Soratra masina
-1 Tim 6.3-10
Vavaka fangatahana +Rainay…
Am-pifaliana indray no hanolorana ny fiarahabana ho antsika mpianakavin’ny finoana ato amin’ny sahan’ny FJKM amin’izao Alahady natokana ho an’ny Sampanasa Fikarohana sy Fandalinampinoana (FFP) izao.Isaorana Andriamanitra izay anton’ny zavatra rehetra fa afaka niombona tamin’ny fankalazana Azy noho ny faha- 50 Taonan’ny FJKM sy ny faha- 200 Taona nahatongavan’ny Misionera LMS voalohany teto Madagasikara isika. Ny FFP dia nanana anjara lehibe tamin’izany tamin’ny fiarahana namolavola sy nanatontosa ny Synodam-pinoana voalohany natao teo amin’ny sahan’ny FJKM ny 15,16,17,18 Mey 2018 tao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana .
Toy ny mahazatra dia misy ny fandaharana iombonana izay nalefa isam-piangonana ary mirakitra izao hafatra vakiana izao .Ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina kosa dia hisy ny fanompoampivavahana iombonana ny tolakandron’ny Alahady 23 Septambra 2018 ao amin’ny FJKM Ambohitrarahaba ,izay hitondrana ny fampianarana miompana amin’ny fahamasinan-toetra eo amin’ny tanora.
Misaotra antsika Fiangonana ny amin’ny fiombonana amin’ny fampiasana ireo Perikopa sy ny boky vokarin’ny FFP ary dia mitaona antsika hitondra amam-bavaka ny asa tanterahina . Misaotra ny fiangonana izay efa nanome fanomezana manokana sy rakitra ho an’ny FFP ary mampirisika antsika rehetra amin’ny fiaraha-miasa .
Hoy ny Soratra masina : »Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny Fiangonana no tadiavo indrindra » 1 Kor 14.12, izay ambara ho fampandrosoana ny fiangonana dia ny fampiorenan-pinoana marina. Koa mampahery antsika hazoto amin’ny fandalinam-pinoana izay izay hitarian’ny FFP antsika ary sahia mijoro amin’ny finoana marina ka tsy ho menatra ny ho vavolombeln’ny Tompontsika . Mirary soa ho antsika rehetra ary manao veloman finaritra amin’ny Anaran’nyTompo.
Ny Birao FFP
RAMAMONJISOA Philibert , Mpitandrina
RABEMANANTSOA Solofo , Mpitandrina